Rohingya Students Forum: June 2018
အေဒီ ၁၇၄၀ တည်ဆောက်နှစ်ဟု
A IDP ROHINGYA
၂၅. ၁၀. ၂၀၁၂
အမျိုးသမီးတွေ အိနြေ္ဒမဲ့ ဝတ်ဆင်မှုကို ရွံ့ရှာသဖြင့် ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းအုပ် တစ်ပါး အိစ္စလာမ်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်း
ကင်ညာ ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းအုပ် တစ်ပါး အိစ္စလာမ်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းပြီး သူကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ ခရစ်ယာန်ကျောင်းကိုပါ ပလီကျောင်းတော်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးခဲ့တယ်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် အမျိုးသမီးတွေဟာ အိနြေ္ဒမဲ့ ဝတ်ဆင်ပြီးတော့ သူ့ကျောင်းထဲ ဝင်လာတာကို သူမကျေနပ်ဘူး။ အဲဒီသူတွေနဲ့အတူ သူကြာကြာ မရပ်တည်နိုင်ပါဘူး လို့ ဆိုပါတယ်။
“ကျနော်ရဲ့ ကျောင်းတော်က နိုင်းလ်ဂိုရှီ ဘုရားဖိတ် ကျောင်းတော်ဖြစ်တယ်။ သို့သော် ယခု အဲ့ဒီကျောင်းဟာ နိုင်းလ်ဂိုရှီ ဂျာမီယာ ဗလီဝတ်ပြုကျောင်းတော်ပါပဲ။” ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းအုပ် ချားလ်စ် အော့ဝါနီ ( Bishop Charles Okwany )ဟာလဲ ယခု အိစ္စမိုက်လ် အော့ဝါနီ ( Ismael Okwany ) အဖြစ် အမည် ပြောင်းလဲ လိုက်ကြောင်း The Nairobian သို့ ပြောပါတယ်။
ကျနော့်ရဲ့ ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းအုပ် သက်တမ်းအတွင်းမှာ ကျနော်ဟာ Malindi, Mombasa, Nairobi နှင့် Tanzania မြို့တို့တွင် ဘုရားသခင်ရဲ့ နှုတ်ခပါတ်တော်ကို တရားဟောရန် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ်။
ကျနော်ဟာ အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကို အခွင့်ကောင်းယူကာ အဲ့ဒေသမှာနေထိုင်တဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်နှင့် အိစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ရဲ့ ဆက်ဆံမှု ဓလေ့ထုံးစံ၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို လေ့လာခွင့်ရခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီ လေ့လာချက်မှ အိစ္စလာမ်ဘာသာဟာ သာ၍ ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့ ဘာသာဖြစ်ကြောင်း နိဂုံးတစ်ခု အနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်။” ဟု သူ ထည့်သွင်း ပြောပြခဲ့တယ်။
သမ္မာကျမ်းစာရဲ့ သွန်သင်မှုဟာ ကျောင်းတော်ထဲမှာ ကာမစိတ်ဆန္ဒ နိုးဆော်သလိုဖြစ်နေတဲ့ ဝတ်စား ဆင်ယင်မှုကို အားမပေးကြဘူး။ ဒါပေမဲ့ တချို့အမျိုးသမီးတွေဟာ မီနီစကတ် နဲ့ အတွင်း ခန္ဓာကိုယ်ကို ပေါ်လွင်စေတဲ့ အခြားအဝတ်အစားတွေကို ဝတ်ဆင်ကြနေဆဲဖြစ်တယ်” လို့ အော့ဝါနီက ဆိုပါတယ်။
တဆက်တည်း အိနြေ္ဒမဲ့ ဝတ်ဆင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေက ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးတွေကိုပင် မှားနေကြောင်း သွေးဆောင်ဖျားယောင်လေ့ရှိတယ်။
ကံမကောင်း အားလျော်စွာ ကျနော် အိနြေ္ဒမဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကို နိမ့်ချ ရှုတ်ချတဲ့အခါ တချို့ လူတွေက ကျနော်မှားနေကြောင်း ထင်ကြတယ်။ သူတို့ဟာ ဘုရားသခင့် အလိုဆန္ဒတော်ကို ဆန့်ကျင်နေတယ် လို့ အော့ဝါနီက ဆိုပါတယ်။
အော့ဝါနီက သူ့အိစ္စလာမ်ခရီးကို ကီစီး စီရင်စု( Kisii County )ရှိ မွတ်စလင်ခေါင်းဆောင်များထံ သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းဖြင့် စတင်ခဲ့တယ်။ သူတို့ကို အော့ဝါနီရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ ရှင်းပြတယ်။ ပြီးနောက် သူ့ကို ရန်ဂွယ် ( Rangwe ) အီမာမ် မုစ်တာဖာဆိုကေ( Mustafa Saoke ) ထံ ညွှန်းပေးခဲ့ တယ်။
စက်တင်ဘာလ ၂၆ တွင် အော့ဝါနီ ဟာ မိမိဆန္ဒအလျှောက် အီစ္စလာမ်ဘာသာသို့ တရားဝင် ကူးပြောင်းကာ သူ့ ခရစ်ယာန်ကျောင်း၏ အခြားအဖွဲ့ဝင် ၂၃ ဦး လည်း နောက်မှ ပူးပေါင်းလာခဲ့တယ်။
Kagan ရပ်ကွက်ရဲ့ မွတ်စလင် ၃၃ ယောက် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် စာရင်းသွင်းပေးရန် ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက် လက်ရှိ အခြေအနေတွင် အဲ့ဒီပလီရဲ့ လူဦးရေမှာ ၆၃ ယောက်ရှိလာပြီ။
မွတ်စလင် တစ်ဦးဖြစ်လာပြီးနောက် အော့ဝါနီဟာ သူ့ဘာသာသစ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီ ပို၍ သိချင်စိတ်ဖြစ်လာ တယ်။
အီစ္စလာမ်ဘာသာ၌ ဘုရားသခင် နှုတ်ကပါတ်တော်တွေကို တရားဟောပြောနိုင်ရန် အလို့ငှာ ကျနော်ဟာ အိစ္စလာမ် သာသနာ့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ သင်တန်းတစ်ခု တက်ချင်တယ်။ လို့လဲ အင်တာဗျူးမှာ ပြောသွားတယ်။
ကျနော် တစ်ခါမှ ဘုရားသခင် သာသနာဆိုင်ရာ သီအိုလိုဂျီ သင်တန်းတွေကို မတက်ခဲ့ဖူးဘူး။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကျနော့်ရဲ့ စလုံး ရေး “စ” ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Posted by Rohang king at 4:42 AM
Labels: world news, ဘာသာရေး
ကျုပ်အဖေကို သူတို့ ပစ်သတ်လိုက်ကြတယ်။
သူတို့ပဲ ဓားနဲ့ ထိုးစိုက်
ဗီယက်နမ် ကဗျာဆရာ လီတန်လွိုင်ရဲ့ ကဗျာ မြန်မာပြန်
Posted by Rohang king at 11:39 AM
အီ​ကွေတာ နဲ့ ပြည်​မြန်​မာ
ပထ၀ီဘာသာအဓိကနဲ့ ဘွဲ့ရခဲ့တဲ့ ဦးလှ​ရွှေ သူ့​မြေးအငယ်​ ​မောင်​ချစ်​ဖွယ်​နဲ့ကျမှ ​ခေါင်းစားရပြီ။ ​ကျောင်းဆရာဘ၀ ကိုလည်း ​အေး​အေး​ဆေး​ဆေး ကျွမ်းကျင်​တဲ့ဘာသာရပ်​ သင်​​ပေးရင်း ဖြတ်​သန်းလာခဲ့တယ်​။ အခု...ကြည့်​..
"ဘိုးဘိုးကြီး ..ဘိုးဘိုးကြီး...ဒီမှာကြည့်​ပါဦး အီ​ကွေတာ...အီ​ကွေတာ..."
"​အေး..​အေး..ကြည့်​မယ်​၊ ဘိုးဘိုးမျက်​မှန်​ ယူ​ပေး။"
မျက်​မှန်​တပ်​ပြီး ​မြေး​လေးပြတဲ့ ကမ္ဘာ့​မြေပုံကို ​ကျောင်းသုံးပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်​မှာ ကြည့်​လိုက်​​တော့မှ......
​လေ​တော့ ​ကျောင်းမဖွင့်​ခင်​ ​ကျောင်းစာအုပ်​​တွေ ၀ယ်​ခိုင်းပြီး ဖတ်​​နေ​တယ်​။ သိချင်​တာရှိ အဘို့ချည့်​​မေး​တော့တာ။
"အီ​ကွေတာမျဉ်းကြီး မြန်​မာပြည်​ ဖြတ်​သွားပြီဗျ။ ဒါ​ကြောင့်​ သားတို့ပြည်​ တအားပူ​နေတာလား။ အီ​ကွေတာမျဉ်းက ​ပြောင်းတတ်​သလား ဘိုးဘိုး"
"မ​ပြောင်းပါဘူးကွာ ဘိုးဘိုး တက္ကသိုလ်​မှာအထူးပြု သင်​ယူလာတဲ့ ဘာသာပဲ ​မြေး​လေးရဲ့။ ​မြေပုံမှား​နေတာ ကွယ့်​။"​
"ဘိုးဘိုး ..​မြေပုံက မှားတတ်​လား.ဟင်​"
"လူက မှားတာ​ပေါ့ ​ငါ့​မြေးရယ်​။"
"အီ​ကွေတာမျဉ်း ဖြတ်​သွားတဲ့ ၁၃ နိုင်​ငံထဲမှာ မြန်​မာနိုင်​ငံ မပါပါဘူးကွာ။​ မြေး​လေးမှတ်ထား မြေပုံဆွဲတာ မှား​နေတာ"
> > > ®< < <
"သူငယ်​ချင်း ညိုပြား အလုပ်​များ​နေလား"
"မများ​ပေါင်​ဗျာ ကိုလှ​ရွှေရာ။ ခင်​ဗျားလို
​မြေးနဲ့ အလုပ်​ရှုတ်​စရာ မှမရှိ။"
"အ​ကြောင်းရှိလို့ ဖုန်းဆက်​တာ။ ကျုပ်​​မြေး​လေးက ​မေး​နေတယ်​။ အီ​ကွေတာ ပြည်​မြန်​မာဖြတ်​သွားတာ တစ်​ကယ်​လားတဲ့။ သူ့ပဉ္စမတန်းစာအုပ်​မှာ ဖြတ်​​နေလို့တဲ့။ ခင်​ဗျားဆီမှာ​ရော ဖြတ်​သွားသလား ကြည့်​​ပေးစမ်းပါဗျာ။ကျုပ်​တို့ ကချင်​ပြည်​နယ်​က စာအုပ်​မှာ​တော့ ဖြတ်​သွားလို့ဗျို့။ပဉ္စမတန်း ပထ၀ီဝင်​ ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်​ စာမျက်​နှာ ၄။"
"ကြည့်​​ပေးပါမယ်​။ ပညာ​ရေး ...​ပညာ​ရေး လူတကာ​ဆွေး​နွေး​နေတဲ့ကြားကဗျာ။ "
ချက်​ချင်းပဲ ​နောက်​ဘက်​အိမ်​က ဆရာမ ဒေါ်နီလာ​ဆွေရဲ့သား​လေး ​မောင်​ဟိန်းထက်​​အောင်​ဆီက ပဉ္စမတန်း ပထ၀ီဝင်​စာအုပ်​ ငှါးကြည့်​လိုက်​တော့....
အိုး....အီ​ကွေတာ ပြည်​မြန်​မာ ဖြတ်​လို့ဗျို့....
အမှားကြာ အမှန်​ မထင်​ရ​လေ​အောင်​ အင်​တာနက်​မှာ အ​ဖြေရှာ တင်​လိုက်​ဦးမှပါ။
​ခေတ်​အဘိုးတို့ သတိထား ဟိုးတုန်းကလို​မြေးများမဟုတ်​။ ဒီ​ခေတ်​​မြေး​တွေကို အမှီလိုက်​ ငိုက်​ကျန်​မ​နေကြနဲ့​နော်​။
ငယ်​ငယ်​ကကြားခဲ့ဖူးတဲ့ ​မြေးအဘိုးနှစ်​​ယောက်​၊ ကြယ်​​ပေါင်းခ တဲ့ ညတစ်​ည တလင်းဝိုင်းမှာ အတူထိုင်​ပြီး ကြယ်​​တွေကို ကြည့်​ရင်း​..
"ဘိုးဘိုး...ဓူဝံကြယ်​ ဘယ်​ဟာလဲ ပြပေးပါလား။"
"ဟိုး....​တောင်​ဘက်​တည့်​တည့်​မှာမြင်​​နေရတာ ဓူဝံကြယ်​​ပေါ့ ​မြေးရဲ့။"
"ဟင်​...ဘိုးဘိုးကလည်း...​မြောက်​ဓူဝံ ​တောင်​ တံငါ့ကွန်​ လို့ပဲ ကြာဖူးပါတယ်​။ ဘိုးဘိုးပြတာ ​တောင်​ဘက်​ကြီးပဲ။"
"ရှူး....တိုး..တိုး..သူများ​တွေကြားသွားမယ်​။ ဒီတစ်​ညထဲ ​တောင်​ဘက်​​ရောက်​သွားတာ ဘိုးဘိုးနဲ့ ​မြေး​လေးပဲသိတယ်​။ ​လျှောက်​ မ​ပြောနဲ့​နော်​...။" တဲ့။ ဟိုး...တုန်းက....
အီ​ကွေတာနဲ့ ပြည်​မြန်​မာ အ​နေမကြာခင်​ ပြင်​နိုင်​ကြပါ​စေ။